जहाँ भाडामा गर्लफ्रेन्ड पाइन्छ – Sidha Post 24
यस्तो अनौठो देश जहाँ भाडामा गर्लफ्रेन्ड पाइन्छ..एजेन्सी – बिश्वमा धेरै अनौठा देशहरु छन् । सबै देशको नियम कानुुन पनि फरक फरक हुने गर्छ । त्यस्तै चीन सरकारले ब्यस्त मानिसहरुका लागी एक अनौठो सुबिधा ल्याएको छ । त्यहाको सरकारले मानिसहरुको व्यस्ततालाई ध्यानमा राखि भाडामा गर्लफ्रेन्ड पाईने सुबिधा ल्याएको छ ।
यो पनि पूर्व प्रेमिकाको बिहेमा जाँदा‘ – विछट्टै प्रेम गर्थे उनलाई। जसको मुहारमा नै संसारकै उत्कृष्ट प्राकृतिक श्रृंगार थियो। मंसिर १४ गते त्यही मुहारको गोलाकारबाट म्यासेन्जरमा म्यासेज आयो। थाहा थियो म्यासेजमा के थियो भनेर। नहेरौं भन्दा पनि मनले मानेन। अनि हतार हतार हेरें। निमन्त्रणा कार्ड पठाएकी रैछे।केटाको नाम हेर्ने रुची मैले गरिनँ। जो सुकै होस्। मलाई के को बाल !
उसले धेरै अघि मलाई सोधेकी थिई के मेरो अर्कैसँग बिहे भयो भने तिमी मेरो बिहेमा मलाई बधाई दिन आउँछौ ? । म आउदिनँ बरु त्यही दिन आर्यघाट पुगेर मुस्लो धुवाँहरू हेरी बस्नेछु। खुबै प्रगतिशील जवाफ दिएको थिएँ मैले। तर फेरि एकचोटि म आफैं गलत सावित भएँ। कुनाको कुर्चीबाट उनलाई नजर लगाउन सकिनँ। जहाँबाट स्पष्ट देखिन्थ्यो त्यही आएर बसेँ। अनि धितमरुन्जेल हेरें।